कोही थाप्दै आउँछन् भने म किन चुप लागेर बस्थें – भाग २ - Wonder Ideas
कोही थाप्दै आउँछन् भने म किन चुप लागेर बस्थें – भाग २
यति गफ गर्दै गर्दा मैले भाउजु को चाकमा लाँडोको टुप्पो छिराइसकेको थिएँ, र मैले चाकभित्रै लाँडो हुँदाहुँदै फेरी मुखभरीको थुक भाउजु को चाकको प्वालमा पर्नेगरि खसालेर लाँडोलाई हल्कासँग अघि-पछी गराउन थालें र भनें “लौ भाउजु , मेरो लाँडो हजुरको चाकभित्र रमाउँदै छ ! गाह्रो भयो त ?” “अँ गाह्रो त होईन अर्कै कस्तो कस्तो खाले अनुभव
भईरहेछ ।“ मैले भाउजु को चाकमा लाँडोको धक्का अरु बढाउन थालें घोडाले घोडीलाई चिकेझैं । भाउजु ले पनि मलाई आफ्नै हिसाबले साथ दिईरहनुभयो । पछाडीबाट चिकेर थकाई लागेपछी मैले आफू र भाउजु लाई सँगै पल्टाएर भुईंमा तेर्सोपरी पछाडीबाट लाँडोले चिक्दै रहें, निकैबेरसम्म भाउजु को चाकमा चिकेपछी मैले भाउजु को चाकबाट लाँडो निकालेर भाउजु लाई आफूतिर फर्काएर किस गर्दै भनें “मजा आयो कि आएन त बुढीमाउ !” “चाकमा चिकाउँदा अर्कै खालको मजा हुँदो रै’छ नि ? यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए तेरो बाउसँग मैले पहिले नै चिकाउँथे नि !” “बुढिमाउ ! हजुरले बुबासँग पहिल्यै गरेको भए त मेरो लाँडो कहाँ चाख्न पाउनुहुन्थ्यो त ? अब त हजुरलाई म र बुबा मिलेर घरैमा दुईतिरबाट चिक्ने हो अनि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ बुढेसकालको जवानी कस्तो हुन्छ ?”
मैले भाउजु को पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्दै गरें “अनि दार्जिलिङ्गमा तेरो साथीसँग घुम्न गएपछी त मलाई कसरी चिक्छस् त ?” “भाउजु पनि ! तपाईं हुन्छ मात्र भन्नु न, विकेश र मैले उसको भाउजु लाई चिकेजस्तै गरी हजुरलाई पनि दुईतिरको मजा दिउँला नि ?” “छ्या ! म जो पायो त्यहिसँग चिकाउँदिन ? पर्*याछैन मलाई भालू बन्न !” “त्यसोभए म तपाईंलाई चिक्छु विकेशले विकेशको भाउजु लाई चिक्छ नि त के भो र ?” “ल ल !” म उत्तानो परें र भाउजु मेरो लाँडोमाथी आफैं मच्चिन थाल्नुभयो । हाम्रो अलैंचीबारी भाउजु -छोराको चिकाईको आवाजले गुञ्जायमान भयो । निकैबेरसम्म भाउजु र मेरो चिकाई खुला आकाशमुनि चलिरह्यो र अन्तमा मैले भाउजु को मुखभरी फुसी बनाईदिएँ । भाउजु को मुखभरी फुसी भएपछी पनि भाउजु ले मेरो लाँडो चुस्दै रहनुभयो । भाउजु ले कपडा लगाउन खोज्दै भन्नुभयो “हिंड
ऊ त्यहाँ खोल्सामा पानी छ पखाल्नुपर्यो !” मैले भाउजु को कपडा समातेर भनें “किन त्यहाँ पुग्नु म सफा गरिदिईहाल्छु नि !” अनि भाउजु को अनुहारमा मुख दल्दै फुसी मुखमा सोहोरेर सफा गरिदिँए त्यसपछि मुखभरीको फुसीलाई फेरी भाउजु को मुखमा ट्रान्सफर गर्दै भनें “यो त भिटामिन पो हो त ? निल्नुस् !” भाउजु ले खुरुक्क फुसी निल्नुभयो घुटुक्क गर्दै । त्यसपछी हामीले कपडा लगायौं र अरु जग्गा हेर्नका लागि हिड्यौं । साँझ सानीभाउजु को घर पुग्दा अध्येरों हुन थालिसकेको थियो, सानीभाउजु ले सोध्नुभयो “निकै ढिला गर्यौं त भाउजु -छोराले ?” मैले सानीभाउजु ले देख्ने गरि लाँडो सुमसुम्याउँदै भनें “यसो खुला आकाशमुनि भाउजु लाई नयाँ तरिकाले मजा दिएको नि !” सानीभाउजु हाँस्दै भन्नुभयो “लाज पनि छैन मोरोलाई !” मैले सानीभाउजु को चाकमा हातले समाएर छोड्दै भनें “हजुरहरु हुनुहुन्छ नै त्यस्तै मनले मान्दै मान्दैन !” “हेर न पात्तेको ! छोड् मेरो…” मैले सानीभाउजु को पुठ्ठालाई फेरी समाएर हल्लाउँदै खेलाएर भनें “हजुरको के सानीभाउजु ?”
“हेर्नु न दिदी यो महेन्द्र मसँग छिल्लिँदै छ !” “के नाटक गर्छेस् अहिले राती राती भएजति प्वालमा निम्त्याउँछेस् !” सानीभाउजु रातै हुनुभयो, मैले सानीभाउजु को पोकालाई हातले समाएर खेलाउँदै भनें “अब फेरी कहिले हो कहिले आज राती त हजुरलाई धित् मर्नेगरी चिक्छु!” भाउजु ले सानीभाउजु को पोकाबाट मेरो हात हटाईदिदैं भन्नुभयो “ल ल छोड्दे अहिले खाना खाउँ पहिला !” म फेरी भाउजु तिर फर्केर भाउजु को पोका समाउँदै भनें “बुढीमाउलाई सौता लाग्यो भन्ने पीर हो की दिदी-बहिनी सँगै मिलेर छोराको लाँडो चाख्ने रहर हो ?” अनि पेन्टबाट लाँडो निकालेर सानीभाउजु को हातमा थमाईदिएँ “आबुई !” भन्दै सानीभाउजु ले मेरो लाँडो हातबाट छोड्नुभयो ।
एक अर्काको घरमा आउन जान कुनै सन्कोच लिदैनौ
येस्तो आनन्द त जिन्दगीमा कहिले पनि लिएको थिएन भनिन
हामीलाई रमाईलो गर्न प्रशस्त ठाँउ पनि थियो
म पनि थाकेर लोत भाकोले उसकै छेउमा पल्टे